परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू: परमेश्‍वरलाई चिन्‍नु | अंश १५८ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू: परमेश्‍वरलाई चिन्‍नु | अंश १५८
शैतानले मानिसलाई सामाजिक प्रचलनद्वारा भ्रष्ट तुल्याउँछ। “सामाजिक प्रचलन” मा विभिन्‍न कुराहरू समावेश हुन्छन्। कतिपय मानिसहरूले यसो भन्छन्: “के यसले हालैको फेसन, कस्‍मेटिक, हेयरस्टायल, र स्वादिष्ठ भोजनहरूलाई जनाउँछ?” के यिनलाई सामाजिक प्रचलनको रूपमा लिइन्छ? तिनीहरू सामाजिक प्रचलनको एउटा भागमा पर्छन्, तर हामी तिनको बारेमा यहाँ कुरा गर्नेछैनौं। मानिसहरूमा सामाजिक प्रचलनले ल्याउने विचारहरू, तिनले मानिसहरूलाई संसारमा आफैसँग कस्तो व्यवहार गर्ने तुल्याउँछ त्यसको तरिका, र मानिसहरूमा तिनले ल्याउने जीवनका लक्ष्यहरू र दृष्टिकोणका बारेमा मात्रै हामी कुरा गर्न चाहन्छौं। यी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्; तिनले मानिसको मनस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न र प्रभाव पार्न सक्छन्। यी प्रचलनहरू एकपछि अर्को गर्दै उत्पन्‍न हुन्छन्, र ती सबैले मानिसहरूलाई विवेक, मानवता र तर्क गुमाउने तुल्याउँदै, तिनीहरूको नैतिकता र तिनीहरूको चरित्रको गुणस्तरलाई झन्-झन् कमजोर तुल्याउँदै मानवजातिलाई अटुट रूपमा नीच तुल्याउने दुष्ट प्रभाव ल्याउँछ, यहाँसम्‍म कि धेरैजसो मानिसहरूमा अब कुनै इज्‍जत, कुनै मानवता छैन, न त तिनीहरूसँग कुनै विवेक नै छ भनेर समेत भन्‍न सकिन्छ, नैतिकताको त कुरै नगरौं। त्यसो भए यी प्रचलनहरू के-के हुन्? ती तैँले नाङ्गो आँखाले देख्‍न नसक्‍ने प्रचलनहरू हुन्। जब नयाँ प्रचलन संसारभरि फैलन्छ, सायद मानिसहरूको सानो सङ्ख्या मात्रै यसको अग्रणी स्थानमा हुन्छन्, अनि प्रचलन निर्माण गर्नेहरूको रूपमा काम गर्छन्। तिनीहरूले कुनै नयाँ कुरा गरेर यसको सुरुवात गर्छन्, त्यसपछि कुनै प्रकारको विचार वा कुनै प्रकारको दृष्टिकोणलाई स्वीकार गर्छन्। तैपनि बहुसंख्यक मानिसहरू अनभिज्ञ अवस्थामा रही यस प्रकारको प्रचनलद्वारा निरन्तर रूपमा तबसम्‍म सङ्क्रमित, संलग्‍न, र आकर्षित हुनेछन्, जबसम्‍म तिनीहरू सबैले यसलाई अनजान रूपमा र अनायसै स्वीकार गर्न थाल्छन् र यसमा डुब्छन् र यसद्वारा नियन्त्रित हुन्छन्। एकपछि अर्को गर्दै त्यस्ता प्रचलनहरूले तन्दुरुस्त शरीर र मस्तिष्क नभएका, सत्यता के हो सो थाहा नभएका, र सकारात्मक र नकारात्मक कुराहरूका बीचमा भिन्‍नता छुट्याउन सक्‍ने क्षमता नभएका मानिसहरूलाई यी कुराहरू साथै शैतानबाट आउने जीवन सम्‍बन्धी दृष्टिकोण र मूल्यमान्यताहरू खुशीसाथ स्वीकार गर्ने तुल्याउँछ। जीवनको पहुँच कसरी पाउनै त्यसबारे शैतानले तिनीहरूलाई बताउने कुरा र शैतानले तिनीहरूलाई “दिने” जिउने शैलीलाई तिनीहरूले स्वीकार गर्छन्, र त्यसलाई विरोध गर्ने तिनीहरूसँग न त सामर्थ्य हुन्छ न त क्षमता नै, चेतना हुने कुरा त परै जाओस्। त्यसो भए, यी प्रचलनहरू वास्तवमा के हुन् त? तिमीहरूले क्रमिक रूपमा बुझ्‍न सक भनेर मैले एउटा सरल उदाहरण छनौट गरेको छु। उदाहरणको लागि, कसैलाई पनि धोका नदिऊँ भनेर मानिसहरूले विगतमा आफ्‍नो व्यापार सञ्‍चालन गर्थे; जोसुकैले खरिद गरे पनि तिनीहरूले सामग्रीहरू उही मूल्यमा बिक्री गर्थे। के यहाँ असल विवेक र मानवताको कुनै तत्वलाई सम्प्रेषित गरिएको छैन र? जब मानिसहरूले यसरी असल नियतसाथ आफ्‍नो व्यापार सञ्‍चालन गर्थे, त्यस बेला तिनीहरूमा केही विवेक र केही मानवता थियो भनेर देख्‍न सकिन्छ। तर पैसासम्‍बन्धी मानिसको सधैँ बढिरहने मागसँगै, मानिसहरूले पत्तै नपाई पैसा, प्राप्ति, र सुख-चैनलाई झन्-झन् बढी प्रेम गर्न थाले। छोटकरीमा, मानिसहरूले पैसालाई पहिलेभन्दा निकै महत्त्वपूर्ण ठान्‍न थाले। जब मानिसहरूले पैसालाई अझै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेर्न थाले, तब आफ्‍नो मर्यादा, तिनीहरूको प्रसिद्धि, तिनीहरूको राम्रो नाम र तिनीहरूको इज्‍जतलाई तिनीहरूले त्यति धेरै महत्त्व दिन छाडे, होइन र? जब तँ व्यापारमा संलग्‍न हुन्छस्, मानिसहरूलाई ठगेर धनी बन्‍नको लागि अरूले विभिन्‍न माध्यमहरू प्रयोग गरेको तैँले देख्छस्। कमाइएको पैसा भ्रष्ट तरिकाले प्राप्त गरिएको भए पनि, तिनीहरू झन्-झन् धनी बन्दै जान्छन्। तिनीहरू तेरोजस्तै व्यापारमा संलग्‍न भए पनि, तिनीहरूको सम्पूर्ण परिवारले तैँलेभन्दा बढी जीवनको आनन्द लिन्छन्, अनि तँलाई नरमाइलो लाग्छ, र तैँले आफूले आफैलाई भन्छस्, “म किन त्यसो गर्न सक्दिनँ? किन मैले तिनीहरूले जति नै कमाउन सक्‍दिनँ? मैले अझै धेरै पैसा कमाउन, मेरो व्यापारलाई सम्‍पन्‍न बनाउन कुनै उपाय सोच्‍नुपर्छ।” त्यसपछि तँ धेरै पैसा कसरी कमाउने भनेर अत्यधिक चिन्तन गर्छस्। पैसा कमाउने सामान्य विधिअनुसार अर्थात् सबै ग्राहकहरूलाई उही रकममा सामान बिक्री गर्ने कार्यबाट तैँले कमाउने कुनै पनि नाफा असल नियतबाट आएको हुन्छ। तैपनि, यो छिटो धनी बन्‍ने तरिका होइन। नाफा कमाउने इच्‍छाद्वारा उत्प्रेरित भएर, तेरो सोचाइमा नै क्रमिक रूपान्तरण आउँछ। यो रूपान्तरणको अवधिमा, व्यवहारसम्‍बन्धी तेरा सिद्धान्तहरूमा पनि परिवर्तन आउन थाल्छन्। जब तैँले कसैलाई पहिलोपटक धोका दिन्छस्, तैँले आफैलाई यसो भन्दै बचाऊ गर्छस्, “मैले कसैलाई धोका दिने यसपटक मात्रै हुनेछ। म यस्तो फेरि कहिल्यै गर्नेछैन। म मानिसहरूलाई धोका दिन सक्‍दिनँ। धोका दिनुका गम्‍भीर परिणामहरू छन्। यसले मलाई धेरै कष्ट ल्याउनेछ!” जब तैँले पहिलोपटक कसैलाई धोका दिन्छस्, तेरो हृदयमा केही असहजता हुन्छ; यो मानिसको विवेकको कार्य हो—तँलाई असहज महसुस गराउने र तँलाई धिक्‍कार्ने, ताकि तैँले कसैलाई धोका दिँदा तँलाई अस्वाभाविक महसुस होस्। तर तैँले कसैलाई सफलतापूर्वक धोका दिएपछि, तँसँग अहिले पहिलेको भन्दा धेरै पैसा भएको देख्छस्, र तँलाई आफ्नो लागि यो तरिका निकै लाभदायक हुन सक्छ भन्‍ने लाग्छ। तेरो हृदयमा भएको हल्‍का पीडाको बावजूद पनि, तँलाई आफ्नो सफलतामा आफैलाई बधाई दिने मन हुन्छ, र आफैप्रति खुसी महसुस हुन्छ। पहिलोपटक, तैँले तेरो आफ्‍नै व्यहोरा, तेरो धोकेबाज मार्गलाई स्वीकार गर्छस्। त्यसपछि, यस्तो धोकाद्वारा मानिस दूषित भइसकेपछि, यो कुनै व्यक्ति जुवा-तासमा संलग्‍न भएपछि ऊ जुवाडे बन्‍नुजस्तै हुन्छ। तेरो अनभिज्ञतामा, तैँले आफ्‍नै धोकेबाज व्यहोरालाई स्वीकृती दिन्छस् र त्यसलाई स्वीकार गर्छस्। अनभिज्ञतामा, तैँले धोकेबाज कार्यलाई उचित व्यावसायिक बानीबेहोरा र तेरो अस्तित्व र जीविकाको लागि सबैभन्दा उपयोगी माध्यमको रूपमा लिन्छस्; तँलाई लाग्छ, यसो गरेर तैँले चाँडै नै सम्पत्ति कमाउन सक्छस्। यो एक प्रक्रिया हो: सुरुमा, मानिसहरूले यस प्रकारको बानीबेहोरालाई स्वीकार गर्न सक्दैनन्, र तिनीहरूले यस्तो बानीबेहोरा र अभ्यासलाई नीच दृष्टिले हेर्छन्। त्यसपछि तिनीहरूले आफै प्रयोग-परीक्षण गर्दै यो बानीबेहोरालाई आफै अभ्यास गरेर हेर्न थाल्छन्, अनि तिनीहरूको हृदय क्रमिक रूपमा परिवर्तन हुन थाल्छ। यो कस्तो प्रकारको रूपान्तरण हो? यो प्रचलनको स्वीकृती र अङ्गीकार हो, सामाजिक प्रचलनले तँमा राखिदिएको यो विचारको स्वीकृती र अङ्गीकार हो। यसको बारेमा महसुस नै नगरीकन, तैँले मानिसहरूसँग व्यापार गर्दा यदि तैँले धोका दिँदैनस् भने, तँलाई अझै खराब महसुस हुन्छ; तैँले मानिसहरूलाई धोका दिइनस् भने, तँलाई आफूले कुनै कुरा गुमाइरहेको भान हुन्छ। अनजानमा, यो धोका तेरो प्राण, तेरो मेरुदण्ड, तेरो जीवनको सिद्धान्त नै बनिसकेको अपरिहार्य बानीबेहोरा बन्छ। मानिसले यो व्यहोरा र यो सोचाइलाई स्वीकार गरिसकेपछि, के यसले उसको हृदयमा परिवर्तन ल्याएको हुँदैन र? तेरो हृदय परिवर्तन भएको हुन्छ, त्यसकारण के तेरो सत्यनिष्ठा पनि परिवर्तन भएको हुँदैन र? के तेरो मानवता परिवर्तन भएको हुन्छ? के तेरो विवेक परिवर्तन भएको हुन्छ? (हुन्छ।) हो, तिनीहरूको हृदयदेखि तिनीहरूको विचारसम्‍म, उक्त व्यक्तिको हरेक भाग गुणात्‍मक रूपले परिवर्तन भएर जान्छ, यतिसम्‍म कि तिनीहरू भित्रदेखि बाहिरसम्‍म परिवर्तन हुन्छन्। यो परिवर्तनले तँलाई परमेश्‍वरबाट झन्-झन् टाढा तान्छ, र तँ झन्-झन् बढी शैतानसँग मिल्दै जान्छस्; तँ झन्-झन् बढी शैतानजस्तै बन्छस्।